BAD: mifantoka amin’ny angovo azo avaozina | NewsMada
BAD: mifantoka amin’ny angovo azo avaozina
Mandray anjara feno amin’ny « One Planet Summit » (OPS 2019) any Naïrobi, nanomboka omaly, ny filohan ‘ny Banky afrikanina momba ny fampandrosoana, Akinwumi Adesina. Fivorian’ny Firenena mikambana momba ny tontolo iainana, ampifandraisina amin’ny fifanarahana eran-tany natao tany Paris, ny taona 2015, na COP 21, manoloana ny fiakaran’ny hafanàna sy ny fiovaovan’ny toetr’andro.
« Andraisan’ny Bad andraikitra feno izao ny fiarovana ny tontolo iainana amin’ny alalan’ny fampiasana angovo azo avaozina. 59 % hatramin’ny 95 % ny famatsiam-bola natokan’ny Bad ho an’izany teo anelanelan’ny taona 2013-2015, ary tamin’ny taona 2017, tafakatra 100 % », hoy ny filohan’ny Bad, Akinwumi Adesina. Saika mahakasika ny toetr’andro ny fankatoavana famatsiam-bola tamin’ny taon-dasa, dingana iray goavana vita amin’ny tanjona kendrena hiadiana amin’ny fiakaran’ny hafanàna.
Laharam-pahamehana dimy lehibe ho an’i Afrika no nampahafantaran’ny Bad tamin’ireo mpivory : manome angovo sy manazava, manome sakafo, mampiroborobo ny indostria, fampandraisana anjara, ary manatsara ny fari-piainan’ny Afrikanina. Manome fampandrosoana maharitra ireo rehetra ireo, ka ny fomba iray hahatrarana izany tanjona izany ny manatsara ny toetr’andro, mampihena ny fihanaky ny carbone.
40 % amin’ny tetibolan’ny Bad hatramin’ny 2020, atokana ho an’ny toetr’andro.
Ao anatin’ny tetikasa, ny hahazoan’ny Afrikanina 250 tapitrisa ny angovo avy amin’ny masoandro. Manentana ny firenena afrikanina izany ny Bad hametraka tetikasa mazava hiadiana amin’ny loza rehetra noho ny fiovaovan’ny toetr’andro, manimba ny fahasalamana sy manapotika ny toekarena.
Maro ireo filoham-panjakana mandray anjara amin’io OPS 2019 io, anisan’izany ny filoha Rajoelina Andry. Isika eto Madagasikara iharan’ny fiovaovan’ny toetr’andro sy fiakaran’ny hafanana. Mbola tsy ahitana fiovana izany hatramin’izao. Ny angovo mitsilopilopy lava.